FENOARIVO-ATSINANANA : Nanaovana tsangambato i Jean Fredy sy Dede Fenerive
Notanterahina ny sabotsy 24 oktobra lasa teo ny fametrahana ny tsangambaton’i Jean Fredy sy Dede Fenerive, ao amin’ny araben’ny fahaleovantena Fenoarivo-Atsinanana. 28 octobre 2020
Tonga nitarika izany ny Minisitry ny Serasera sy kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo.
Raha tsiahivina, fanamby nataon’ny talem-paritry ny serasera sy ny kolontsaina Analanjirofo, Ndiamahazo Mickaelys ny fanamboarana tsangambaton’ireo olona nitondra avo ny lazan’ny Faritra Analanjirofo teo amin’ny tontolon’ny kolontsaina sy serasera, anisan’izany i Dede Fenerive sy Jean Fredy. Tanteraka izany ankehitriny.
Milanja 135 kg eo ho eo ny iray amin’ity tsangambato ity izay vita tamin’ny alalan’ny akora plâtre. Mirefy 1m 30 ny tsangambaton’i Jean Fredy raha 1m sy 42 kosa ny an’i Dede Fenerive.
Naharitra 5 volana ny asa fanamboarana. Sarin’i Jean Fredy sy Dede Fenerive tamin’ny taona 70 sy 80 no niaingana. Fanamboarana izay nahazo fankatoavana sy tsodrano tamin’ny fianakavian’ireto mpanakanto ireto. Ny volana marsa 2020 no efa vita ary nokasaina saika hapetaka ny volana avrily teo fa noho ny fihibohana dia nahemotra tamin’ity volana oktobra ity ny fametrahana azy.
Ho an’i Jean Fredy, dia ny 3 Marsa 1952 izy no teraka ary maty tamin’ny 16 mey 2001. Rabemanantsoa Bertrand Régis kosa no tena anaran’i Dede Fenerive, teraka ny 18 Mey 1954 ary nodimandry tamin’ny 01 jolay 2017. Izy ireo izay samy tao amin’ny tarika Miarema, tarika niforona ny taona 1974 tao Fenoarivo-Atsinanana. Ny ben’ny tanànan’i Fenoarivo Atsinanana tamin’izany fotoana izany Laingo Ralijaona no nanome ny anaran’ny tarika. Niantso ireo mpanan-talenta tao Fenoarivo-Atsinanana ny tenany mba hiarina hamoha indray ny kolontsaina. Izay no nahatonga ilay hoe Miarema. Izany hoe tsy misy idiran’ny resaka antoko Arema akory ilay anarana hoe Miarema. Ity tarika ity no tarika avy any amin’ny Faritra anisany namaky lay voalohany tao amin’ny Tranompokonolona Isotry Antananarivo. Feno hipoka avokoa ireo toerana rehetra nanaovan’i Miarema fampisehoana manerana ny Nosy.
Tranoben’ny serasera sy kolontsaina
Nandritra io fametrahana tsangambato io ihany koa no nanoloran’ny Minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina ny mariboninahitry ny kanto ho an’ireo artista miisa valo, izay mpikambana tao amin’ny Miarema fahiny. Enina ireo nakarina eo amin’ny laharam-boninahitra Chevalier, roa kosa no notolorana ny Officier. Nandritra ny lahateny nataon’ny Minisitry ny Sserasera no nilazany fa reharehan’i Madagasikara iray manontolo i Jean Fredy sy Dede Fenerive. Velom-pankasitrahana ny ezaka ataon’ny minisitera amin’ny alalan’ny talem-paritry ny serasera sy kolontsaina ao Analanjirofo ny vahoaka any an-toerana.
Ny minisitra Lalatiana Andriatongarivo izay nampanantena ihany koa fa hanome tranoben’ny serasera sy kolontsaina ny Faritra Analanjirofo amin’ny taona 2021 ho avy io. Voaresaka ihany koa ny fanetsehana ireo festival mampiavaka. Vakoka no sady manome endrika tsara ny tanànan’i Fenoarivo Atsinanana ilay tsangambato. Nifanome tanana tamin’ny talem-paritry ny serasera sy kolontsaina Analanjirofo tamin’ny fanamboarana izao tsangambato izao ny solombavambahoaka Mohamad Ahmad, ny ben’ny tanànan’i Fenoarivo-Atsinanana, ny mpanao sary Ravanison José Christian, Judicael Ah-Kan sy Soanera Gabrielle izay samy mpandraharaha zanaky ny Faritra. Hitohy ireo ezaka amin’ny fanandratana ny kolontsaina any an-toerana.
Tovolahy 18 taona nanolana an-jandriny vavy 06 taona voasambotra ANATIHAZO-ISOTRY (365) 25 janvier 2021 Ho azo tanterahina eto Madagasikara ny fandidiana famindrana voa FIANGONANA SY NY FANJAKANA (97) 25 janvier 2021 Niakatra 442 ny marary vaovao, 06 ny namoy ny ainy FIVOARAN’NY COVID-19 (89) 25 janvier 2021 Mikatsaka ny fampidinana ny vidin-jiro sy rano eto Madagasikara FILOHA ANDRY RAJOELINA (72) 25 janvier 2021 Mpanendaka miisa 06 sy mpifoka rongony roa saron’ny Polisy ASAN-JIOLAHY ETO AN-DRENIVOHITRA (57) 25 janvier 2021 Tonga ireo fitaovana vaventy fanaovan-dalana FANOMEZANA FAHALEOVAN-TENA NY FARITRA (54) 25 janvier 2021